सहमति भाँडियो (भत्कियो र भंग) । - Enepalese.com
सहमति भाँडियो (भत्कियो र भंग) ।
इनेप्लिज २०७२ असोज २९ गते ७:५२ मा प्रकाशित
संविधान भएको एक महिना पनि नबित्दै संविधान संशोधन गरेर संविधान सभा बहिष्कार गरेका सभासदहरुलाई फकाउने (मनाउने) कोसिस भईरहेको छ । संविधानको अस्तित्व र मुल्यांकन के ? यसप्रकार यो संविधान कति पटक संशोधन हुने ? अब संविधान एकलौटी सरकारको दुइ तिहाई बहुमतले मात्र संशोधन गर्न मिल्छ । नेताहरुले जतिखेर चाह्यो उतिखेर मिलीजुली र खिचडी सरकारको दुइ तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गर्न मिल्छ ?
राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको भनाइ अनुसार संविधान, संविधान (मुलुकको ऐन, कानुन र नियम) नभई दस्तावेज हो । यदि संविधान दस्तावेज हो भने पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष भन्न मिल्छ र ?
दोस्रो संविधान सभामा काँग्रेस, एमाले, एकिकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक बिच भएको सोह्र बुँदे सहमतिको आधारमा संविधान ल्याउने सहमति भएको थियो । सर्वप्रथम त फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजय कुमार गच्छदारले संविधान सभा बहिष्कार गर्नाले आधा सहमति भाँडियो र भंग भएको हो । काँग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले २०७२ साल असोज २३ गते प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दिएपछिको निर्वाचन सँगै पुर्ण रुपले सहमति भत्केको र भाँडिएको छ ।
तीन दलका नेताहरुले संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले संविधान सभा बहिष्कार गरेका सभासदहरुलाई संविधान निर्माणमा सहभागी गराउन नसकेको किन ? संविधान सभा नै बहिष्टकार गरेका सभासदहरुको संविधान निर्माणमा योगदान र भूमिका के ? त्यसकारण यो संविधान दिर्घकालिन सम्म टिकाउ संविधान होइन । अन्त्यमा यो संविधान फेल भएर जानेछ ।
२०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा भन्दा २०७२ सालको जनआन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीहरु र नागरिकहरु बढी मारिएका छन् । २०६२।०६३ सालको राजतन्त्र (राजसंस्था) लाई निरंकुश भन्ने की ? २०७२ सालको सुशिल प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वको सरकार, काँग्रेस, एमाले र एकिकृत माओवादी दलका नेताहरुलाई निरंकुश भन्ने ?
नेपाल–भारतको तिक्तता र असमझदारीले विरोधी तत्वहरुले सलबलाउने ठाउँ पाई रहेका छन । यो विरोधी तत्वहरुले गर्दा नै नेपाल र भारतको असल सुमधुर सम्वन्धमा मनमुटाव, मतभेद, खटपट र दरारको वातावरण पैदा हुन गएको हो । आपसी मतभेद, खटपट र दरारले दुवै देशलाई घात पुग्न जान्छ ।
पुर्वाञ्चल विकाश क्षेत्र, मध्यमाञ्चल विकाश क्षेत्र, पश्चिमाञ्चल विकाश क्षेत्र, मध्यपश्चिमाञ्चल विकाश क्षेत्र र सुदुरपश्चिमाञ्चल विकाश क्षेत्र यी ५ वटा विकाश क्षेत्रलाई (१) पुर्वाञ्चल प्रदेश (२) मध्यमाञ्चल प्रदेश (३) पश्चिमाञ्चल प्रदेश (४) मध्यपश्चिमाञ्चल प्रदेश (५) सुदुरपश्चिमाञ्चल प्रदेश नाम राखेर विकेन्द्रिकरण भएका ठाउँहरुबाट आम नेपाली नागरीकहरुलाई सेवा सुविधाहरु दिन कार्यान्वयनका लागि र राजनीतिक दलहरुका नेताहरु र सांसद (सभासद) हरुको अनिर्णय र अराजकताका कारण यस राष्ट्रलाई निकास दिने प्रकारको नयाँ शक्तिको आवश्यकता (Requirement of Rise) रहेको छ ।